Mpaminany tsy miasa amin'ny iPhone? Ity ny vahaolana! - Hafa
paoma iphone 6 plus ny efijery mikasika tsy mandeha
azo antoka ve ny icy azo ampiasaina raha bevohoka
ny fomba fanovana memoji amin'ny iphone
Mpaminany tsy miasa amin'ny iPhone? Ity ny vahaolana!
Tsy hampiditra amin'ny iPhone ny Messenger ary tsy fantatrao ny antony. Mihoatra ny iray tapitrisa ny olona mampiasa ny fampiharana fandefasan-kafatra Facebook isam-bolana, ka rehefa misy tsy mety dia manahirana be izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aminao aho maninona ny Messenger no tsy miasa amin'ny iPhone-nao ary hasehoko anao ny fomba fanamboarana ny olana .
Rehefa tsy mandeha amin'ny iPhone ny Messenger dia ny dingana voalohany sy tsotra indrindra hanamboarana ny olana dia ny famonoana ny iPhone-nao indray. Indraindray io dia hanamboatra bug sy rindrambaiko madinidinika izay mety hiteraka tsy fetezan'ny app Messenger.
esory menaka voanio amin'ny volo
Mba hamonoana ny iPhone-nao dia tsindrio ary tazomy bokotra fatoriana / fifohazana (ny bokotra herinaratra) mandra-pisehoan'ny 'slide to power off' amin'ny efijery iPhone-nao. Ampiasao amin'ny rantsan-tànana iray ny kisary herinaratra mena avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone.
Mba hamerenana ny iPhone-nao dia tsindrio ary tazomy bokotra fatoriana / fifohazana indray mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo afovoan'ny efijery iPhone-nao.
Akatony ny rindranasan'ny Messenger
Mitovy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone, ny fanidiana sy ny fanokafana Messenger dia afaka manome fanombohana vaovao ny fampiharana raha toa ka hianjera na hiaina olana amin'ny rindrambaiko ilay rindranasa.
Mba hanakatonana Messenger, tsindrio ny bokotra Home indroa hanokafana ny app selector amin'ny iPhone-nao. Tsindrio avy eo ny Messenger sy ny efijery. Ho fantatrao fa mihidy ny fampiharana rehefa tsy miseho intsony ao amin'ilay mpisafidy fampiharana.
Zahao ny fanavaozana ny App Messenger
Indraindray, ny mpamorona dia hamoaka fanavaozana mba hanitsiana ireo hadisoana sy hadisoana amin'ny lozisialy. Raha tsy mandeha amin'ny iPhone ny Messenger dia mety mampiasa kinova efa lany andro amin'ny fampiharana ianao.
iphone niraikitra tamin'ny loop'ny logo an'ny paoma
Raha te hahamarina fanavaozana ny app Messenger ianao dia sokafy ny App Store amin'ny iPhone-nao. Avy eo paompy eo amin'ny kiheba fanavaozana eo amin'ny faran'ny efijery iPhone-nao. Eto amin'ity pejy ity dia hahita ny lisitry ny rindranasa misy fanavaozana misy ianao.
Azonao atao ny manavao ny fampiharana tsirairay amin'ny alàlan'ny fanoratana Manavao eo akaikin'ny fampiharana iray, na havaozy indray mandeha izy ireo amin'ny alàlan'ny fanoratana Vaovao farany .
Esory ary apetaho indray ny Messenger
Indraindray dia simbaina ireo rakitra fisoratana anarana, izay mety hiteraka tsy fahatanterahana. Mety ho sarotra ny manara-maso ny fisie tsirairay, noho izany dia hesorinay tanteraka ilay app ary apetrakay indray izy io. Rehefa mamafa ny Messenger ianao dia ny kaontinao tsy hesorina , Nefa mila mampiditra ny mombamomba ny fidirana indray ianao!
Mba hanesorana ny Messenger, tsindrio moramora ary tazomy ny kisary fampiharana mandra-pihetsiketsika ny iPhone sy ny fampiharana anao. Tsindrio ny X kely eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny kisary fampiharana, avy eo paompy Manafoana rehefa miseho eo afovoan'ny efijery iPhone ny fampandrenesana fanamafisana.
Raha hametraka ny fampiharana dia sokafy ny App Store ary kitiho ny kiheba Fikarohana eo amin'ny zoro ambany ankavanana. Kitiho ny 'Messenger', avy eo kitiho ny kisary rahona miaraka amin'ny zana-tsipika ambany mba hametrahana indray ilay fampiharana.
iphone 6 efijery olana efijery
Mampiasa Messenger ve ianao rehefa mifandray amin'ny Wi-Fi?
Tompona iPhone maro no mampiasa ny fampiharana Messenger rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi izy ireo. Raha tsy mandeha amin'ny iPhone ny Messenger raha mifandray amin'ny Wi-Fi dia araho ny dingana roa eto ambany raha hivaha ny olan'ny fifandraisana Wi-Fi ianao.
Vonoy ny Wi-Fi ary avereno indray
Ny famonoana ny Wi-Fi sy ny fiverenany dia manome ny iPhone fotoana faharoa hananganana fifandraisana madio amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao. Raha tsy nifandray tamin'ny Wi-Fi araka ny tokony ho izy ny iPhone dia mety tsy afaka mampiasa fampiharana toa ny Messenger amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ianao.
Mba hamonoana Wi-Fi, sokafy ny fampiharana Fampiharana, avy eo paompy Wi-Fi. Tsindrio ny switch eo akaikin'ny Wifi hampijanona ny Wi-Fi. Ho fantatrao fa maty izy io rehefa fotsy fotsy ny switch ary apetraka ankavia izy. Mba hamerenana amin'ny laoniny Wi-Fi dia kitiho fotsiny ny switch. Ho fantatrao fa ny fifandraisana Wi-Fi dia mivoaka rehefa maitso ny switch ary apetraka ankavanana.
Adinoy ny tambajotranao wifi
Raha tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny Wi-Fi dia mety misy olana amin'ny fomba fampifandraisan'ny iPhone ny router Wi-Fi anao. Rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny iPhone voalohany dia mamonjy angon-drakitra toy ny mifandray amin'ilay tamba-jotra Wi-Fi. Raha miova amin'ny fomba rehetra io fomba io dia mety tsy ho afaka mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny iPhone-nao.
Mba hanadinoana ny tamba-jotra Wi-Fi dia sokafy ny fampiharana Setroka ary kitiho ny Wi-Fi. Avy eo, kitiho ny bokotra fampahalalana (tadiavo ilay manga i) eo akaikin'ny tambajotra Wi-Fi tianao hohadinoina. mikasika Adinoy ity tambajotra ity manadino ny tambajotra.
inona ny data amin'ny iphone
Zahao raha mivoaka ny mpitondra hafatra
Indraindray ny rindranasa toa ny Messenger dia mizaka ny fikojakojana mpizara mahazatra mba haharaka hatrany ny tobim-pivoaran'ny mpampiasa. Rehefa mitranga izany dia tsy afaka mampiasa ilay app ianao mandritra ny fotoana fohy. Azonao atao jereo ny satan'ny mpizara messenger amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy.
Ny dingana farany ataonay amin'ity torolàlana famahana olana ity raha tsy miasa amin'ny iPhone ny Messenger dia ny famerenana ireo fikirana rehetra. Rehefa mamerina ny fikirana rehetra ianao dia ho voafafa ny angon-drakitra rehetra voatahiry ao amin'ny app Settings ao amin'ny iPhone. Araka ny efa noresahiko teo aloha, mety ho sarotra ny manara-maso olana momba ny rindrambaiko manokana, noho izany dia haverinay ho vahaolana 'lamba firakotra' daholo ny toerana rehetra.
iphone dia tsy handoa vola rehefa tafiditra
Raha hamerina ny fikirana rehetra dia sokafy ny fampiharana Settings ary kitiho General> Reset> Reset setting . Ampidiro ny teny miafinao, avy eo tap Ampodio Fikirana rehefa miseho eo ambanin'ny efijery ny varavarankely fanamafisana. Haverina haverina ny toe-javatra ary hiverina ny iPhone.
Atombohy ny fandefasana hafatra!
Nametraka ny fampiharana fandefasan-kafatra Facebook amin'ny iPhone ianao ary afaka manomboka mifandray amin'ireo namanao sy fianakavianao. Alao antoka fa halefa amin'ny namanao amin'ny media sosialy ity lahatsoratra ity mba hahafantaran'izy ireo izay tokony hatao rehefa tsy mandeha amin'ny iPhone-n'izy ireo ny Messenger!